यि दाजुभाई देख्ने जो कोही विदेशी भनेर झुक्किन्छन् ,जन्मदै बिदेशी जस्ता दाजुभाईको पसलमा पुग्दा जे देखियो!! (भिडियो) « Np Online TV
यि दाजुभाई देख्ने जो कोही विदेशी भनेर झुक्किन्छन् ,जन्मदै बिदेशी जस्ता दाजुभाईको पसलमा पुग्दा जे देखियो!! (भिडियो)
प्रबिन शाक्य अनि प्रत्येक शाक्य झट् हेर्दा नेपाली होइनकी जस्तो लाग्नु स्वाभाबिकै हो । उनीहरुको कलर बिदेशीको जस्तो छ,दुबै जना निकैनी मिठो गीत गाँउछन् प्रबिन दाजु हुन भने प्रत्येक भाई हुन । दाजुले गिटार बजाइरहेको देखेपछिनै भाई प्रत्येकलाई पनि संगीतमा लाग्ने प्रेरणा मिलेको बताउछन् । दुईजना मिलेर म्युजिक सप पनि चलाउन् सपबाट पनि निकैनी खुसी भएको बताउने शाक्य दाजुभाइको नयाँ गीत पनि केहि दिनमा सार्वजनिक हुदैछ ।बाकी कुराकानी हेर्नुहोस भिडियोमा: